#GOOGLE #MAIL now #available #BURMESE in #Myanmar fonts in Google.com.mm -video | democracy for burma
tags: 74th language, Burma, Burmese, GMAIL, google.mm, LANGUAGES, Myanmar, myanmar fonts, NATIVE SPEAKER, now available, software, Update, Video
26/2/2015 Gmail now available in Myanmar (Burmese) Myanmar speakers can switch their language in their Gmail settings starting today. To capture the nuances of this language and make sure the translations were accurate, consistent and complete, we relied on an array of Myanmar speakers from within the country, and around the world. In April 2013 we launched Google Search in Myanmar, and today we’re excited to announce that Gmail now supports Myanmar (Burmese), our 74th language.http://mingalapar.com/forum/index.php/topic/5071-gmail-now-available-in-myanmar-burmese/ http://www.youtube.com/watch?v=BIZ98CRQTFA updated http://www.myanmarmobileapp.com/2013/08/01/sms-service-%E1%82%8F%E1%80%BDင့်-internet-service-မ%E1%80%BAားသည်-၁-၈-၂၀၁၃/ http://www.aungkyaw.com/2013/05/chrome.html software http://www.aungkyaw.com/2013/05/chrome.html http://www.google.com.mm/ မြန်မာစာအသုံးပြုထားသည့် Google Home Page စတင်သုံးစွဲနိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့် ယူနီကုဒ်စံများနှင့် ကိုက်ညီသော Myanmar3Font (MM3) မြန်မာစာကို အသုံးပြုထားသည့် Google Home Page အသစ်တစ်ခုကို ယနေ့မှစတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Google မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် Googe စာမျက်နှာတွင် မြန်မာဘာသာကိုအသုံးပြုကာ ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ကိုယ်ပိုင် Home Page တစ်ခုကို စတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော Googe ကုမ္ပဏီ၏ ယခုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ သည် ယင်းလုပ်ငန်းစု၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ မစ္စတာ အဲရစ်ရှမစ် ပြည်တွင်းသို့ လာရောက်ပြီးရက်သတ္တပတ်နှစ် ပတ်ကျော်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအတွင်း မြန်မာဘာသာစကား အသုံးပြုသူ သန်းလေးဆယ်ကျော်ရှိသော်လည်း အင်တာနက်အသုံးပြုသူ တစ်သန်းမျှသာရှိသေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ယခုကဲ့သို့ Google Search ပေါ်တွင် ထောက်ပံ့မှုများပေး ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အထက်ပါဆောင်ရွက်ချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာဘာသာပြောကြားသူများအနေဖြင့် အင်တာ နက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် အသုံးဝင်သည့်အချက်အလက်များရှာဖွေခြင်း၊ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာသို့ ဝေမျှ ဖြန့် ဝေလိုသည့်အချက်အလက်များကို ဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရာတွင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်အ တွက်ဖြစ်ကြောင်း Google ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းပေးပို့ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယခုကဲ့သို့ Myanmar3Font ကိုအသုံးပြုပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည့် Google Home Page ကို အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် Google ကုမ္ပဏီက တခြားသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြစ်သည့် မွန်၊ က ရင်၊ ကယား၊ ပလောင်၊ ရှမ်းနှင့်ပါဠိ ဘာသာ စကားများကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် Google က ယူနီကုဒ် ကီးဘုတ်မရှိသူများအနေဖြင့် virtual keyboard ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် search box တွင်ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ယခုကဲ့သို့ Google Home Page ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါအမေရိကန် ကုမ္ပ ဏီ ကို ကူညီပေးခဲ့သည့် Asia Foundation, Digital Democracy, Information Matrix နှင့် အခြားသောကူညီ ပေးသူအချို့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း အထက်ပါကြေငြာချက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ Google အနေဖြင့် www.google.com.mm ဟူသည့်မြန်မာဒိုမိန်းနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ ၂၁ ရက် က စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏ Google Play ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ပြည် တွင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
Google.com.mm ကို မြန်မာဘာသာဖော်ပြချက်များနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ Google သည် www.google.com.mm ကို မြန်မာဘာသာဖော်ပြချက်များဖြင့် တရားဝင် ပြောင်းလဲ လွှင့်တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့်www.google.com.mm သို့ ဝင်ရောက်ပြီး Search Box ၏ အောက်ဘက်တွင်ရှိသော “မြန်မာဘာသာ”ဟူသည့် စာလုံးကို ကလစ်နှိပ်ကာ menu ဖော်ပြချက်များအား မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ www.google.com.mm ကို မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် စတင်၍ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း မြန်မာဘာသာဖော်ပြချက်များဖြင့် မဟုတ်ချေ။ ယခု ဧပြီလ ၄ ရက်တွင်မူ မြန်မာဘာသာဖော်ပြချက်များ ပါဝင်သောwww.google.com.mm ကို Google က တရားဝင် ပြောင်းလဲလွှင့်တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ www.google.com.mm မှ မြန်မာဘာသာ ဖော်ပြချက်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မိမိ၏ ကွန်ပျူတာတွင် Myanmar 2, Myanmar3စသည့် ယူနီကုဒ်ဖောင့် အမျိုးအစားတစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲသည့် မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် Google ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ်ရှမစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့ပြီးနောက် Google ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သော Google Play Store ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့သည်။ Myanmar promising to help connect residents to the Web. Today, Google has begun to follow through on its word by introducing support in Burmese, the major local language. Its local search portal — google.com.mm, which launched just before Schmidt’s visit — now supports the language, in addition to six others spoken in the country: Mon, Karen, Kayah, Pali, Rumai Palaung and Shan. There’s no further news on the status of Android, which Schmidt said would be opened in the country. Google made its Android app store partially available on the eve of Schmidt’s trip, but it is still working to enable downloads to devices in the country. While news of language support may not seem huge, the gesture from Google is significant, as it demonstrates its commitment to bringing its search portal, and access to information, to the world. Of course, cynics argue that this is simply another effort to boost Google’s bottom line by creating more users to serve ads to. But the introduction of local search will help millions of novice Internet users navigate the Web, to say the very least. Meanwhile, as reported by Asian Correspondent, the government of Myanmar announced it will drastically reduce the price of SIM cards. Once retailing ataprohibitive $2,000 dollarsapop, SIM cards will now be available for just $2-3 US dollars –aprice certainly affordable the average consumer. This marks the deliberate breaking down ofapolitically-motivated barrier to Internet access. This development is much needed. According to statistics, it is estimated that only 2-3 million people in Myanmar ownacellphone – about 3% of the population. However, keep in mind that last January, HTC launched six of its phones in the region, complete with local language support. Cheaper Chinese devices are also available. With some of the key obstacles to Internet access removed, the conditions for an influx of new users are smoothly, gradually falling into place. While that much is certain, we’ll have to wait and see exactly how free Myanmar’s Internet turns out. Indeed, the government has welcomed Eric Schmidt, who didn’t shy away from advocating an open Web in his speech. But with China looming large as the nation’s biggest investor, that country is definitely well positioned to take advantage of the new telecommunications space, which could have further implications for online freedom. Ultimately, the government will likely have to choose which philosophy to embrace: one akin to Google’s, or one on par with China’s. For now, that choice remains down the road, and we can only watch for signs as Internet usage in Myanmar grows more widespread. Android app များရယူရန် => http://www.myanmarmobileapp.com/category/androidapp/ Android game များရယူရန် => http://www.myanmarmobileapp.com/category/androidgame/ http://www.myanmarmobileapp.com/2013/01/24/android-ဖုန်းထဲသို%E1%82%95-က%E1%80%BCန်ပ%E1%80%BA%E1%80%B4တာမ/
← TWO MUSLIM MEN WHO ATTACKED A MEDIATION MONK ARRESTED IN ARAKAN
BREAKING NEWS:Ye Min Oo -Ko Ray Min Oo – MISSED YOUTH LEADER BROUGHT TO COURT-video →